Sh. Aadan-Siiro oo Xukuumadda ku eedeeyay boobka hantida Umadda | Somaliland.Org
Sh. Aadan-Siiro oo Xukuumadda ku eedeeyay boobka hantida Umadda
June 28, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- “Waad ogtihiin Garoon yar oo Kubadda Cagta ah oo ah 120-Mitir (Garoonka Dugsiga Ex-Xuseen Giire)..Dawladda maanta jirtaa waxay ku dhiiratay, nidaam baa jira ah dad baa la abuurayaa, la maalgelinayaa, loo magac-bixinayaa, taariikh cusub ayaa dadka loo samaynayaa. Waxay ku dhiiradeen dhulkii uu Afweyne oo ahaa ninkii aynu la dagaallamaynay uu ka xishooday in uu bixiyo Dugsiyadii Caruurta. Waa wax laga xishoodo, waxaa maanta Caruurtu isku dilayaan waxa weeye, meel allaala meel ay istaagaan bay la’ yihiin, halka ay ahayd maanta in Guryaha waawayn ee ay ku jireen ee ay leeyihiin umaddu in intay burburiyaan ay Garoomo uga dhigaan, ayaa afartii Garoon ee bannaan ee yaryaraa ee Caruurtu waqtiga ku lumin lahaayeen ayay u soo dhigteen. Laakiin, waxaan kaga ciil la’ahay, lama odhanayo kamaanu hadal, balse waxba idiin tari mayso Masaajidkan oo aynu isugu nimaadnaa. Quwaddu waa Umadda iyo bani’aadamka, waar Caruurta Garoomadooda difaaca, Waddooyinka difaaca. Waad ogtihiin Goljanno (Hargeysa) Maydka meel la geliyaa ma jirto oo Waddooyinkii baa la xidhayaa oo inta aynu hadba Guryo dhaadheer intaynu dhisano ay koox gaar ahi Waddooyinka xidhaan adiga oo soo taagan..Nin cararaya ayaa imanaya oo ku odhanaya, Sheekh maxaa ku kallifay miyaad danahaaga iska qabsatid. Waar halkee dano lagu qabsanayaa, halkee lagu noolaanayaa haddii lagu kala tago, halkee ayaynu umad ku noqonaynaa haddii lagu kala tago..Waar wixiina ilaashada, waar waxay Caruurtu leeyihiin ilaaliya, waar waxa inaga dhaxeeya ilaaliya, waar taas ayaynu dal, dawladnimo iyo dadnimo ku yeelanaynaa.” Sidaa waxa yidhi Sh. Aadan Maxamuud Xiirey (Sh. Aadan-Siiro) oo ka hadlay arrimo uu ka mid yahay muran ka taagan mid ka mid ah Garoomada Kubadda Cagta ee Degmooyinka Hargeysa.